AOL Whitelist - Ahoana ny fomba ahitanao ny Whitelist amin'ny AOL
Fandikana ny mailaka anao amin'ny AOL
Talata, Septambra 11, 2007 Talata, Jolay 15, 2014 Douglas Karr
Angamba satria mbola iray amin'ny lehibe indrindra izy io ISP ary ny tena mailaka momba ny mailaka, ny AOL dia tena manana serivisy Postmaster mahafinaritra an-tserasera. Tsy maintsy nifandray tamin'izy ireo aho rehefa nitatitra ny mpanjifa fa manana olana amin'ny alàlan'ny mailaka mankany amin'ny adiresy mailaka AOL izy ireo. Azo antoka fa hitanay fa voasakana ny adiresy IP an'ny fisoratanay.
Somary mahatsiravina izany, toa ny spammer na zavatra hafa… fa tsy izany. Ny mailaka rehetra dia voajanahary amin'ny fifanakalozana na fanasana. Raha ny marina dia tsy misy mailaka marketing avy amin'ireo adiresy ireo. Niantso namana tsara sy mpampianatra afaka mamonjy ahy aho, Greg Kraios, ary nasehony ahy niaraka tamin'ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny paositra AOL ary koa ny Tranonkala AOL Postmaster. Niantso azy ireo aho ary nampahafantarin'izy ireo ahy izay dingana azoko atao mba hisakanana ny sakana ary hiditra amin'ny whitelist.
Hitako ny olanay lehibe indrindra dia ny fandefasan'ny rafitrinay ny kaonty mailaka AOL tsy mandeha amin'ny laoniny ary tsy mandeha tsara ny fitadiavana Reverse DNS. Reverse DNS dia fitaovana iray hijeren'ny ISP ny fonenanao sy ny mombamomba ny orinasa amin'ny adiresy IP niaviany. Tamin'ny famonoana azy dia toy ny spammer izahay. Miaraka amin'ny adiresy ratsy ampy - nanapa-kevitra ny AOL fa hijery hoe iza izahay. Rehefa tsy hitan'izy ireo hoe iza izahay, dia nosakanany izahay. Mampisy dikany! Tsy afaka milaza aho fa manome tsiny azy ireo.
Aorian'ny nahazoantsika ny Reverse DNS, nandatsaka ny sakana i AOL. Niresaka tamin'ny ekipanay Sales ihany koa aho ary nilaza tamin'izy ireo mba hitsahatra tsy hanao demo amin'ny adiresy mailaka AOL (izy ireo no mora idirana indrindra, sa tsy izany?). Aorian'ny fianjerana ny sakana, avela ianao hangataka lisitra fotsy amin'ny alàlan'ny tranokala Postmaster. Nangataka am-polony in-folo farafahakeliny aho - saingy hitako fa tokony ho misesy ny gana alohan'ny hahavitanao azy:
Izahay dia namela ny Reverse DNS Lookup isaky ny adiresy IP izay andefasantsika mailaka.
Tsy maintsy nanangana adiresy mailaka fanehoan-kevitra izahay mba hanoratan'i AOL anay rehefa misy olana amin'ny mailaka. Nametraka fanararaotana izahay @. Mbola miasa ihany izahay amin'ny fametrahana lohateny mailaka ho an'ny "Error-To" fa fanombohana tena tsara io.
Tsy maintsy niandry andro vitsivitsy taorian'ny nanakanana anay.
Ny sehatra misy anao dia tokony hifanaraka amin'ny sehatra ao amin'ny adiresy mailakao amin'ny fifandraisana sy ny valiny. Ianao dia afaka soraty amin'ny AOL ny adiresy mailaka FBL anao.
Raha manana sehatra hafa ianao dia tokony hampihatra isaky ny.
Aza hadino ny manara-maso ireo adiresy mailaka natolotrao. Mila tsindrio rohy fanamafisana alohan'ny hiasan'izy ireo amin'ny fangatahanao fotsy.
Ny dingana farany dia ny miandry valiny. Raha voahodina ianao dia azonao atao ny miantso ny Postmasters ary manome azy ireo id id. Io dia hahafahan'izy ireo mijery azy haingana ary hahita izay tsy mety. Standby hanao izany fotoana vitsy!
Manantena aho ny andro ahafahantsika manilika an'ireto mailaka ireto hiala amin'ny antsika mpamatsy tolotra mailaka rafitra ka tsy mila miahiahy momba izany isika! Miandry ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny rafi-mailak'izy ireo (izay nanampy ahy hofaritana!) Ary koa ny firoboroboan'ny orinasanay. Arakaraka ny ahafahantsika mampiasa ny serivisy fanaterana azy ireo no tsara kokoa!
AOL dia manana serivisy Postmaster mahafinaritra, saingy aleoko tsy niaritra ny aretin'andoha mihitsy. Fanamarihana iray, raha manontany tena ianao hoe tsy maninona aho na manakana anay izy ireo sa ny olana entina hanamorana anarana antsika… tsia. Tiako ny mahita orinasa mailo momba ny SPAM sy mikarakara ny mpanjifany.
Naharitra andrana roa ny fanandramana alohan'ny nahitanay ny tantaran'ny fandefasana hafatra ho an'ny AOL ho fotsy, fa nanao izany taorian'ny andrana roa:
Ny fangatahanao Whitelist, miaraka amin'ny kaody fanamafisana xxxxxxxx-xxxxxx, dia nankatoavina.
Tsy azonao antoka raha voasakana ny mailakao sa tsia? Aza hadino ny mampiasa an Fitaovana fanaraha-maso fametrahana Inbox hahitana sy hamahana ny olana manokana momba ny ISP.
Tags: 250okAOLlisitra mainty aolaol postmasteraol whitelistmailaka voasakanafblfanovozan-kevitrafametrahana boatympamatsy serivisy amin'ny InternetISPsivana junkamin'ny spamfitarainana momba ny spamsivana spam
Douglas Karr Tuesday, September 11, 2007 Tuesday, July 15, 2014
Inona ny atao hoe Marketing Interactive?
Enga anie ka hifarana toy izao ny dokambarotra fivarotana fiara rehetra!